ओलीले धम्काएर काेही डराउन्न, उनी संविधानभन्दा माथि हाेइनन् : सुशीला कार्की - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com ओलीले धम्काएर काेही डराउन्न, उनी संविधानभन्दा माथि हाेइनन् : सुशीला कार्की - खबर प्रवाह
ओलीले धम्काएर काेही डराउन्न, उनी संविधानभन्दा माथि हाेइनन् : सुशीला कार्की
काठमाडौं। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले संसद बिघटनको विषयमा धम्की नदिन चेतावनी दिएकी छन्। उनले संसद विघटन असंवैधानीक कदम भएको भन्दै एक आम नागरिकको तरिकाले बोलेको र बोल्न पाउने अधिकार भएको बताएकी छिन्।
उनले भनेकी छन्, ‛धम्की नदेउ। हिम्मत छ भने प्रतिनिधि सभा विघटनको फैसलालाई उल्ट्याउ। मैले पदमा हुँदा गरेका गलत काम छन् भने पनि देखाउ र जेल हाल होइन भने यो असंवैधानिक कार्यनै हो। प्रधानमन्त्रीको त्रुटि यसमा छ यससँगै राष्ट्रपतिको समेत त्रुटि रहेको छ। संविधानमा नै नभएको कुरा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने रास्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरिदिने? नागरिकको तरिकाबाट बोल्छु। देश संकटमा जादा म पूर्वप्रधानन्यायाधीश हो भनेर हेरेर बस्न सक्छु र? मैले पढेको कानुन अनुसार गलत हो। नेताहरूले संविधान मान्नुनपर्ने भए छुट्टै कुरा हो।’
यस अघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरेकी थिइन्। एक टेलिभिजन कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिँदै उनले केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम असंवैधानिक भएकाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका लागि संविधानका धारा ७६ नै काफी भएको बताइन्।प्रधानन्यायाधीशले चाहेको खण्डमा १५ दिनभित्र फैसला सम्भव हुने उनले बताइन्।
कार्कीले मुलुक बचाउने वा डुबाउने तथा अदालतको गरिमा बचाउने वा नबचाउने जिम्मेवारी यतिबेला अदालतको काँधमा भएको बताइन्। नागरिकले विश्वास गरेको थलोले नागरिकको विश्वास कायम राख्न सक्नुपर्ने कार्कीको भनाइ थियो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले संवैधानिक इजलासबाट मुद्दाको टुङ्गो लगाउन चुनौतिपूर्ण भए वृहत इजलासमा लगेर पनि फैसला गर्न सकिने बताइन्।